အိမ်တွင်း ရောင်းရန်နှင့်ငှားရန် အပေါ် Realtyww Info
အိမ်တွင်း in West Yorkshire
အိမ်တွင်း in Scarborough
အိမ်တွင်း in North Yorkshire
အိမ်တွင်း in Darwen
အိမ်တွင်း in Lancashire
အိမ်တွင်း in Cumbria
အိမ်တွင်း in Seaham
အိမ်တွင်း in Durham
အိမ်တွင်း in Hemel Hempstead
အိမ်တွင်း in Hertfordshire
အိမ်တွင်း in Eastwood
အိမ်တွင်း in Norwich
အိမ်တွင်း in Norfolk
အိမ်တွင်း in Worksop
အိမ်တွင်း in Nottinghamshire
အိမ်တွင်း in Holmfirth
1 - 10 ၏ 4927 စာရင်းများ
Grade II Listed2bedroom mid cottage which has been fully renovated toavery high standard throughout. Boasting character features; such as exposed beams and stone feature walls. Located inaquiet and popular location, justafew minutes walk to Walsden train station with links to Manchester and ...
Todmorden in West Yorkshire, Ol14 7su
ထုတ်ဝေသည် Face2face Estate Agents
မြင်ကွင်း အိမ်တွင်း ထုတ်ဝေခဲ့သည် 1 day ago
3 Bed Cottage For Sale In Scarborough, North Yorkshire
Full description Positioned on this well regarded road overlooking the picturesque river and weir we are delighted to be able to bring to the market this lovely three bedroomed semi detached character cottage having large garden to the rear which includesaplanning application in process foratwo ...
Scarborough in North Yorkshire, Yo13 9ja
ထုတ်ဝေသည် Colin Ellis Property Services
Internal inspection isamust to fully appreciate this lovingly restored traditional cottage situated in this semi rural setting on the A666 with easy reach of both Darwen town centre and Bolton. The property provides tasteful and stylish accommodation withaluxury feel and quality finish throughou...
Darwen in Lancashire, Bb3 2tu
1 Bed Cottage To Rent In Lake District, Cumbria
A stunning, one bedroom cottage located in the desirable village of Stainton. The beautifully presented double glazed accommodation is heated with programmable high efficiency storage heaters and briefly comprises: Entrance hall, lounge, dining kitchen, sun room, bathroom and first floor bedroom. Ou...
ငှားရန် | 1 အိပ်ရာ| 1 ရေချိုး
Lake District in Cumbria, Ca11 0ep
ထုတ်ဝေသည် Cumbrian Properties
2 Bed Cottage For Sale In Seaham, Durham
LocationOffering easy access for commuting to the A19 travelling both North and South, is only ten minutes from Sunderland and within 30 minutes from Newcastle upon Tyne and Durham. It isashort distance away from the Seaham sea front, where you will find an array of shops, cafe's, bistro's and the...
Seaham in Durham, Sr7 0ax
3 Bed Cottage For Sale In Hemel Hempstead, Hertfordshire
An extended period cottage situated withinastones throw of the town centre and within an easy walk of hemel station. Comprisingalounge dining room, refitted kitchen breakfast room,aground and first floor bathroom as well asamaster bedroom with ensuite shower room, three bedrooms and enclosed...
Hemel Hempstead in Hertfordshire, Hp1 1jp
ထုတ်ဝေသည် Michael Anthony Hemel Hempstead
1 Bed Cottage To Rent In Eastwood, Nottingham
Charles Newton Co Estate Agents are pleased to offer for rent this One Bedroom additional room Cottage offering Lounge, Kitchen, 1st Floor, Double Glazing and Enclosed Rear Garden. The property has been recently redecorated throughout and had new carpets fitted.Available now…...Full Description:Loun...
Eastwood in Nottingham, Ng16 3nt
ထုတ်ဝေသည် Charles Newton Co Estate Agents
AbbotFox Bespoke presents Bretts Manor,aremarkably rare Grade II listed 14/15th Century Wealden house enjoyingaquiet rural position off of Wacton common. Accommodation includes an impressive fully vaulted great hall, kitchen breakfast room, utility room, well proportioned sitting room, study, fi...
Norwich in Norfolk, Nr15 2up
Withagenerous 1309 sq ft of accommodation, this stunning Victorian Cottage offers accommodation across two levels and comprises;abright entrance way leading toasitting room with fireplace feature, the modern fitted kitchen with integrated appliances, dining room and bright living room with fir...
ငှားရန် |3အိပ်ရာ|2ရေချိုး
Worksop in Nottinghamshire, S80 4ls
ထုတ်ဝေသည် Redbrik Estate Agents
A lovely and larger than expected two double bedroom end terrace cottage with large garden and beautiful Holme Valley views. The property has undergoneaprogramme of modernisation with an oak and granite kitchen, Travertine tiling, down lighters, neutral decoration and quality floor coverings.Entra...
Holmfirth in West Yorkshire, Hd9 6et
ထုတ်ဝေသည် Earnshaw Kay
အိမ်တစ်အိမ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အိမ်ငယ်လေးတစ်လုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဟောင်းနွမ်းသောသို့မဟုတ်ဟောင်းနွမ်းသောအဆောက်အအုံဖြစ်ခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုသယ်ဆောင်နိုင်သည်။ မျက်မှောက်ခေတ်အသုံးပြုမှုတွင်အိမ်တစ်အိမ်သည်များသောအားဖြင့်ကျေးလက်ဒေသ (သို့) ကျေးလက်ဒေသတစ်ဝိုက်တွင်ကျိုးနွံ။ မကြာခဏပျူငှာစွာနေထိုင်သည်။ ထိုစကားလုံးသည်အင်္ဂလန်၏ဗိသုကာလက်ရာမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်မူလကမြေညီထပ်လူနေမှုနေရာနှင့်အဆောက်အအုံ၏အောက်ထပ်တွင်ကျောက်တုံးကျောက်ခဲများအောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသောအိပ်ခန်းတစ်ခန်းသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအိပ်ခန်းတစ်ခန်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဗြိတိသျှအင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင်ယခုဝေါဟာရသည်ရိုးရာတည်ဆောက်မှု၏သေးငယ်သောအိမ်ငယ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ သို့သော်၎င်းကိုရိုးရာအိမ်များ ("mock cottages") နှင့်ဆင်တူသောခေတ်မီဆောက်လုပ်ရေးတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ အိမ်များသည်သတ္တုတွင်းကျေးရွာများရှိအိမ်လုပ်သားများဆောက်လုပ်ထားသောအိမ်များကဲ့သို့သောသီးခြားအိမ်များသို့မဟုတ်လှေကားထစ်များဖြစ်နိုင်သည်။ လယ်ယာလုပ်သားများအတွက်ချည်ထားသောနေရာထိုင်ခင်းမှာများသောအားဖြင့်အိမ်တွင်းဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တောင်သူလယ်သမားများသည်တစ်ချိန်ကအိမ်တွင်းလုပ်သားများအဖြစ်လူသိများခဲ့သည်။ အားလပ်ရက်အပန်းဖြေအိမ်သည်ယဉ်ကျေးမှုများစွာတွင်နာမည်အမျိုးမျိုးဖြင့်တည်ရှိသည်။ အမေရိကန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင် "အိမ်တွင်း" သည်အားလပ်ရက်အိမ်များအတွက်အသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်သူတို့ကို "cabin", "chalet" သို့မဟုတ် "camp" ဟုလည်းခေါ်နိုင်သည်။ အချို့သောနိုင်ငံများတွင် (ဥပမာ၊ စကင်ဒီနေးဗီးယား၊ ဘောလ်တစ်စ်နှင့်ရုရှား) တွင်“ အိမ်တွင်း” ဟူသောဝေါဟာရသည်ဒေသန္တရဝေါဟာရများရှိသည် дача (အားလပ်ရက် / နွေရာသီအိမ်သို့ရည်ညွှန်းနိုင်သော dacha, မကြာခဏရေအလောင်းအနီး) တွင်ရှိသည်။ အဓိကအားဖြင့်အိမ်ရာကျွန်များဆောက်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောအမေရိကန်မြို့များတွင်အိမ်တွင်းပုံစံအိမ်များရှိသည်။ ကနေဒါကဲ့သို့သောနေရာများတွင် "အိမ်ငယ်" သည်အရွယ်အစားအရိပ်လက္ခဏာများမသယ်ဆောင်ပါ (vicarage သို့မဟုတ် hermitage နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ)